Indlu kaFisherman eyi-200 m ukusuka elunxwemeni - I-Airbnb
Indlu kaFisherman eyi-200 m ukusuka elunxwemeni
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uChristophe iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indlu eqhelekileyo eyi-Pleasant 200m ukusuka e-Royau Beach and Customs Trail (GR 34). I-Trestel Beach ikude
nge-600m kwaye inegaraji kunye negadi ngasemva.
Indlu isandul 'ukulungiswa, inegumbi elikhulu lokuhlala kumgangatho osezantsi (kwigumbi lokuhlala nekhitshi) elingange-50 m2 elinendawo yokungena egaraji. Igaraji iyakwazi ukufikelela kwigumbi lokuhlambela xa kubuya ukuqubha kunye negadi.
Igadi, ixesha elide, ifakwe ifenitshala yasegadini, itafile yokutyela, indawo yokoja kunye ne-portico yabantwana.
Ngaphantsi, inendawo ejonge amagumbi okulala amabini amakhulu (igumbi lokulala eliyi-1 : ibhedi eyi-160 x 200, igumbi lokulala eliyi-2: iibhedi eziyi-2 eziyi-90 x 200 + idrowa eyi-90 x 190) elinye lawo likwenza ukwazi ukusebenzisa igumbi lokuhlambela.
Indawo yokuhlala inezixhobo zosana: ibhedi yosana, isitulo esiphakamileyo, ipaki.
Indlu elungele izibini ezithandanayo ezinabantwana.
Kumbindi wonxweme lwelitye elipinki, le ndlu ikwiimitha eziyi-200 ukusuka elunxwemeni lweRoyau kwaye ikufutshane nolwandle i-Trestel (isikolo sokusefa) kunye ne-Port Blanc (isikolo sokuhamba ngesikhephe).
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Trévou-Tréguignec